Maitiro Ekudzidzisa Imbwa: Ndeipi Ndeye Akakodzera? - Imbwa Kudzidziswa
Dzimwe nzira dzekudzidzisa imbwa dzinoshanda zvakanyanya pane mamwe mamiriro kupfuura mamwe.
Kune zvinoreva zvakawanda kune izwi rekuti “kudzidziswa.” Izvo zvakakosha kuti unzwisise kuti kana iwe uri kusarudza izvo zvaunofanirwa kuita nembwa yako.
1. Kudzidzira maitiro
Urwu ndirwo rudzi rwekudzidziswa uko imbwa inodzidziswa kuve 'mugari akanaka.' Kazhinji izvi zvinosanganisira kudzidziswa imba, hunhu hwakanaka kutenderedza vamwe vanhu uye imbwa, zvine mutsindo leash tsika uye zvimwe zvinhu zvidiki zvinoita kuti imbwa ive inonakidza shamwari. Imbwa yakazvibata inokwezva hapana chakakosha chiziviso kubva kuruzhinji (kunze kwekushamisa vamwe nehunhu hwavo hwakanaka).
Izvi zvinowanzo dzidzisa imbwa maitiro ekuita chaiwo mabasa. Izvi zvinogona kusanganisira zvechivanhu 'kuteerera' zviitwa senge chitsitsinho. Iko kusimbiswa pano kuri kwekukurumidza uye chaiko kuita. Kunyangwe paine mikana yakawanda yekudzidzira kwakadai, iko kudzidziswa kunowanzoitirwa kudzidziswa uye kwete kuti uvandudze hunhu hwembwa.
Imbwa dzave dzichiteerera kudzidziswa dzichaita mamwe mabasa kana varidzi vawo vaakumbira kuti vadaro. (Uye sezvazviri, imbwa dzinoteerera dzakadzidziswa dzinogona kuzvibata zvisina kunaka; imbwa inofudza yakanaka kwazvo iyo inohukura zvishoma pasina chikonzero chiri pachena ingave iri muenzaniso.)
3. Kudzidziswa kwekuita
Chekupedzisira, kudzidziswa kwezviitiko kunoreva kudzidziswa kwezviitiko zvakati - izvi zvinosanganisira kuvhima, kufudza, kutsvaga uye kununura, kukwezva kufambidzana - chero yehuwandu hwakawanda hwezviitiko zvakagadzirirwa kuratidzira kugona kwembwa nemubati wake, kunyanya mune zviitiko izvo imbwa yakave yakaberekwa kuita. Mazuva ano, chiitiko chakadai chinosanganisira mitambo yakadai saFrisbee, flyball, agility, zvichingodaro.
Ehe mitsara inowanzo nyonganisa pakati peese aya mutsauko. Imwe huwandu hwekuteerera kudzidziswa kunobatsira nemaitiro. Semuenzaniso imbwa iri kutsitsinho haizodhonza pa leash. Zvakadaro iwe unoda kuchengeta izvi mupfungwa kana uchisarudza kirasi yekudzidzira kuitira kuti inyatsoenderana nezvako zvaunoda. Kune vazhinji varidzi vezvipfuyo, maitiro akatungamirwa makirasi ndiyo nzira yakanakisa yekudzidza kunzwisisa uye kudzora imbwa yako. Kune avo pakati penyu vanoda kunakidzwa nemutambo kana kukwikwidza muchiitiko neimbwa yenyu vanofanirwa kuenda kune kumwe kudzidziswa kwakaomarara.
Iwe unofanirwa kuziva kana imbwa yako ichida hunhu hunoshandurwa (kwaunofanira kuziva chikonzero chiri kuita kuti imbwa yako ichere kwete kungoisa huku yehuku pamusoro pezvose) kana kuteerera kwekudzidzisa (kuti unzwisise mirairo). Zvirokwazvo, vaviri ava vanogona kunge vachifambidzana: imbwa inochera nekuti yakaboorwa inogona kuzoshoreka nekuteerera kudzidziswa uye kumira kuchera. Izvo zvakakosha, zvakadaro, kuti unzwisise kuti iyo imbwa yakamira kuchera nekuti yakanga isisina kufinhwa pane nekuti ikozvino yave kuziva chitsitsinho. Iwe unozofanirwa kugadzirisa maitiro ako, kana kusarudza murairidzi kuti akubatsire, uine hunhu maringe nekudzidziswa mupfungwa.
Zvakawanda kwazvo zverudzi rwezvinhu zviri kudzidziswa! Chimwe chinhu chekufunga nezvacho ndechekuti kune nzira zhinji dzekudzidzisa chero yeizvi.
Batsira! Ndeipi Imbwa Yekudzidzisa Nzira Ndiyo Rudyi Poshi?
Iko hakuna chaicho chakanaka kana chakaipa. Kune nzira dzinoshanda zvakanyanya pasi pemamwe mamiriro kupfuura dzimwe. Zvinhu zvekufunga nezvazvo pakusarudza nzira inoshanda kwazvo iwe nembwa yako inosanganisira: hunhu hwako, hunhu hwembwa yako, zvinangwa zvako, kugona kwako semudzidzisi, uye ruzivo rwako semudzidzisi.
Semuenzaniso, kana usiri kufara neimwe nzira yekudzidzira, chero chikonzero, saka hazvigone kuti iwe nembwa yako muite zvakanaka neiyi nzira. Imbwa yako ichatora pane kusada kwako uye inogona kugovera kushushikana kwako kana kutora mukana wemamiriro ezvinhu kuita sezvaanoda.
Kana imbwa yako iri yakasimba, tora mhando, nzira isingaitane nehunhu uhu inoita kuti iye afambe achienda nezvirongwa zvekudzidzisa, achitora zvishoma kuita. Zvakare, kana imbwa yako ichinyatso kunetseka, panogona kunge paine nzira dzakasiyana dzaungashandise chero bedzi uchinyatso chenjera nezvekuti unomururamisa sei. Kana, imbwa inozviisa pasi ingangoda imwe nzira inosimbisa kudzidza chimwe chinhu chitsva kwazvo kuti vagogona kuva nechivimbo sezvinobvira pavanenge vachizviita. Iwe unofanirwa kucherechedza imbwa yako padhuze uye uone kuti ndeapi masimba uye kushaya simba.
Unyanzvi hwako wega semudzidzisi hunotanga kutamba, zvakare. Vamwe vanhu vane pfungwa yechisikigo yenguva uye kunzwisisika kwepamoyo kweizvo imbwa yavo iri kufunga uye maitiro ekuzviitira. Vanhu vazhinji havana kugona uku asi vanogona kuchidzidza kune imwe nhanho nekufamba kwenguva. Vamwe havadaro. Kuziva kwako kwakasimba uye kusasimba kunokutendera kuti ushandise imwe neimwe zvinobudirira. Kumwe kugona kune vamwe vanhu vanoita kunge vanongova nako, vamwe vanogona kukura, nezvimwewo kugona 'kuverenga' imbwa; ndizvo chaizvo fungidzira izvo imbwa iri kufunga kana kunzwa panguva yekudzidziswa. Kugona uku kwakakosha sezvo kuchikubvumidza iwe kugadzirisa zvakakodzera pane nhunzi kuti uwedzere kushanda kwedzidziso yako.
Dzimwe nzira dzinoshanda chaizvo asi dzinogona kushungurudzwa kana munhu asiri iye akadzishandisa. Semuenzaniso, iyo Koehler nzira yekudzidzisa imbwa yakashanda zvakanyanya mushe pambwa zhinji, mumaoko eanotanga. Koehler anonzi aive nehungwaru hwekuziva nguva uye kuziva kwakanyanya nzira yekupa chimwe chinhu zvakaringana kumbwa, asi iyo 'Koehler Method' sekushandisirwa nevamwe yaigara ichishungurudza zvekuti nhasi nzira iyi yekudzidzisa imbwa iri mukuzvidzwa.
Zviripachena, saka, mudzidzisi akanaka ndeuyo anobatsira iwe tsvaga maitiro ekudzidzisa imbwa yako. Mudzidzisi akanaka anokubatsira iwe kudzidza kucherechedza imbwa yako kune akakosha manongedzo kune ake maitiro uye zviito. Mudzidzisi akanaka anokuona iwe nembwa yako muchishanda pamwe chete uye zvinobatsira iwe kudzidza kwauri kuregedzera imbwa yako pasi.
Basa remurairidzi, muchidimbu, nderekudzidzisa iwe kuti uve murairidzi wembwa yako wega. Haisi basa remurairidzi kudzidzisa imbwa yako. Kazhinji, iwe unongoona murairidzi wako kweawa imwe chete pasvondo. Kudzidziswa kunoda mapfupi, ezuva nezuva. Iwe ndiwe uri kudzidzisa imbwa yako. (Kutumira imbwa kure kuti inodzidziswa ndeyekufunga kwakapatsanuka, iine yayo seti yematambudziko angangoitika.) Mudzidzisi akanaka ane nzira dzinoverengeka pasi pebhandi ravo uye zvinokubatsira kuona kuti ndedzipi dzinoshanda zvakanyanya nembwa yako.
Usatombo kunetseka, kune mamwe maconstant mune imbwa yekudzidzira. Kufanana uye kurongeka.
Dzidziso ye Kudzidza
Ngatitangei nekuongorora kwazvino dzidziso dziri kumashure kwekudzidza.
Maitiro mazhinji ekudzidzisa anonyatsoshandisa zvishoma zvezvose kunyangwe kana akaremerwa kune imwe nzira kana imwe nzira. Uye dzimwe nzira dzekudzidzisa dziri kunyatso kushandisa iwo iwo iwo misimboti kunyangwe dzichiita sedzakasiyana zvakanyanya. Saka zvakakodzera kuenda pamusoro peizvi.
Iwo misimboti yechinyakare mamiriro ezvinhu akaitwa kunze kutanga kwezana rino ramakore naPavlov, uye nekudaro inonziwo mamiriro ePavlovian.
Mukuyedza kwekutanga, bhero rakaridzwa, uye iyo nyaya (sezvazvinoitika, imbwa) yakapihwa chikafu; pakupedzisira, imbwa yakatanga kumedzerera mate ichinzwa bhero, sezviri kutarisira kutarisira kuuya kwechikafu. Izvi zvakachena zvinokurudzira-mhinduro zvinhu, sezvo chiratidzo (bhero) chinogara chichiuya pamberi pekusimbiswa, uye imbwa haiite chero chinhu kuita kuti bhero riridze.
Saka isu tinotanga ne:
Mudzidzisi anorira bhero (kukurudzira)
Imbwa inowana chikafu (chisimbiso)
Uye kupedzisira uine:
Mudzidzisi anoridza bhero
Imbwa drools (mhinduro)
Imbwa inowana chikafu
Izvi zvingashandiswa sei? Nzira huru yekushandisa yechinyakare mamiriro ndeye kudzidzisa imbwa yechipiri mibairo.
Ngatiti iwe unoda kushandisa rimwe izwi kana kunyangwe ruzha (senge kubaya) semubairo nekuda kwekuti zviri nyore kupfuura chero mubayiro wepamoyo wako mukuru. Saka dzidzisa imbwa yako nekutaura izwi kana kuita ruzha uye wozomubata nemubayiro wekutanga. Anozotanga kubatanidza vaviri nekukurumidza uye imwe sarudzo yako inozove yakakodzera mubayiro wepakati kune imbwa yako. Iwe unofanirwa kuzorodza musangano nguva nenguva, hongu, asi zvinowedzera zvaunogona kuita repertoire yekuudza imbwa yako 'Waita zvakanaka!'
Kana iwe uchicherekedza, iwe uchaona zvakare kuti imbwa zhinji dzakajairirwa. Kana iwe ukati 'Gara!' uye vagere, iyo inoteedzana- yekuteedzana kuteedzana zvisinei nekuti garo pacharo rakadzidziswa sei.
B.F. Skinner akarondedzera misimboti yezvaakadana kuti 'inoshanda mamiriro.'
Mukupesana neyakajairika mamiriro, mukushanda kwekugadzirisa iyo yekusimbisa kutenderera inotanga neimwe chiito pane chikamu chemudzidzi (mumutauro weSkinner, anoshanda). Anoshanda mamiriro ezvinhu saka anogara achienderana nehunhu, nepo echinyakare mamiriro asiri.
Imbwa inoita chimwe chinhu (hunhu hunoshanda)
Imbwa inowana chikafu (yakanaka inosimbisa)
Pasi pedzidziso iyi, kana tikadzora hunhu hunosimbiswa, tinofanirwa kuwana imbwa kuti ipe iwo maitiro kakawanda. Kana iyo imbwa ikawana zvinhu zvakanaka mukubatana nehunhu hunhu, angangozvidzokorora; kana chimwe chinhu chakaipa chikaitika, kashoma kuti azvitaure. Ini
n anoshanda ekudzidzisa mazwi, izvi zvinoreva kuti kana Andy akanhonga dumbbell yake (nhanho 1), Andy anowana imwe turkey (nhanho 2); kana akasadaro, haawane turkey. Mhedzisiro yacho inofanirwa kuve yekuti mukufamba kwenguva, Andy achabata dumbbell nechido, kunyangwe kana asiriye wekutora chaiwo.
Kubatanidza zvinhu zveimwe neimwe
Mukudzidzira kwemazuva ano imbwa, yakawanda yekutarisisa inobhadharwa kune inoshanda mamiriro - 'kiyi yekudzidzira' hapana chimwe kana kushoma pane iko chaiko-iko kushanda kwechikamu chidiki chidiki chekutsvaga kweSkinner. Asi echinyakare mamiriro ezvinhu aripo nguva dzose aripo, uye anofanirwa kuchengetwa mupfungwa: funga nezve imbwa inonzwa bhero - kudonhedza kwake kunomiririra rudzi rwekutarisira kunofadza kwatinoda imbwa inoshanda.
Classical mamiriro, mukushandisa kwayo kunoshanda, zvese ndezvekudzidziswa kwemaonero. Kana iye achibatanidza zvinhu zvakanaka (zvakanaka kusimbisa) nemamiriro ekudzidzira (funga nezve izvo sekunge bhero rinorira) acharatidza mhando imwechete yekuda iyo yaungatarisira kana ukapamhidzira kubva kune vanomhanyisa vaPavlov.
Uye zvakare, kunyangwe neanoshanda mamiriro pane imbwa, iwe unozopedzisira uchibatanidza rairo nehunhu, kuti ugone kukwezva hunhu kubva kune chinokurudzira!
Kurongeka kwakadai kungave:
Imbwa inopa hunhu (taura kugara)
Imbwa inopihwa mubairo
Kutenderera kunoenderera kusvikira imbwa ichiramba ichipa hunhu
Mudzidzisi zvino anoti 'gara'
Iyo inosanganisa zvinhu zvese zviri zviviri zvinoshanda uye zvekare mamiriro ekugadzirisa.
Mibayiro uye Kugadziriswa
Chengetedza izvi zvakasimba mupfungwa:
Mubairo unoguma nekuwedzera kwehunhu hwakasarudzwa.
Kugadziriswa kunoguma nekuderera kwemaitiro akasarudzwa.
Zvakanaka izvo zvinoita sezviri pachena zvakakwana, nei ndakanetseka kuisa izvo pasi? Nekuti kazhinji kazhinji, pachena sezvaingave iri, nhamba inoshamisa yevanhu vanoisa hanya navo. Kangani kawakaona mumwe munhu achidana imbwa yake achidzokorora nekudzokororazve iyo imbwa isina hanya ichivarega? Vangani vanhu vanozvimisikidza nekungopa mubayiro imbwa yavo nguva dzese kudzamara vaona kuti imbwa inoshereketa uye inodzungaira, kana kuita chimwe chinhu kunze kwekunge chikafu chabatwa pamberi pavo? Vangani vanhu vanorova mbwanana dzavo kana dzikamira mumba asi vasingazombomira nembwa yakadzidziswa imba?
Ngationgororei chimwe nechimwe chezviitiko izvi zvakadzama. Iye munhu anosheedza imbwa yavo kakawanda asina kuita chero chinhu ari kudzidzisa imbwa yavo kuti iyo 'Huya' kuraira haina maturo. Iyo imbwa haisi kupihwa mubairo wehunhu chaihwo kana kugadziriswa kwehunhu husingadiwe. Naizvozvo 'Huya' haina zvarinoreva kune iyi imbwa.
Kana iwe uchingogara uchipa mubayiro imbwa zvisinei nekuti anoita sei yakasarudzwa maitiro, iwe uchave nezvinhu zviviri zvinoitika. Kutanga, hunhu hahuzombogadzirise sezvo imbwa isina mhinduro pane izvo zviri 'nani'. Chechipiri, iyo imbwa inodzidza kuti inogara ichipiwa mubairo, saka kurudziro yekuramba uchishanda (kunze kwekunge imbwa iri chikafu chakakurudzirwa) ichaderera. Kana, kana iyo imbwa iri yakasimba chikafu chinokurudzirwa, inogona kumhara ichiramba kuita chero chinhu iyo nguva yaanoona kuti haizowana chikafu. Mune ino yekupedzisira kesi chikafu chakamira kuve mubairo uye ikozvino chave mvumo uye hachichazowedzere hunhu hwakasarudzwa.
Mbwanana iyo yakarohwa nekuda kwekutsvaira mumba haina nzira yekubatanidza kururamisa nechiito, kunyanya kana zvikaitika mushe mushure mechiito. Zvakare, kurova imbwa kunodudzirwa nembwa sehasha pane kugadzirisa uye nekudaro hazvizodzikise hunhu hwasarudzwa.
Dzokera kune mibairo. Mibairo inofanirwa kupihwa nenzira yekuwedzera hunhu huri kutaurwa. Izvi zvinoreva, kutanga, kuti icho chinofanirwa kuve chinhu icho imbwa yako chinonakidzwa uye chinokurudzirwa nacho. Kune dzimwe (dzakawanda) imbwa, chikafu chinoita. Matoyi, makwikwi, matoyi ekutambisa, mabhora etenisi, anowanzo ari mabheti akanaka. Imbwa shoma dzinoita senge dzinokurudzirwa nemuromo, kunyangwe kutaura chokwadi, kwete yakawanda sevanhu vangade kufunga. Muzviitiko zvakawanda imbwa dzinodzidza kugamuchira rumbidzo yemuromo semubayiro wechipiri, kuburikidza nekubatana nemubayiro wekutanga. Iwe unogona zvakare kushandisa akawanda mibairo nzira, kunyanya kana iyo ichifarira imbwa yako.
(Mubairo wekutanga chinhu chinopa mubayiro kunembwa yako - chikafu, kupuruzira, matoyi, nezvimwewo. Mubairo wechipiri chimwe chinhu chinodzidziswa nembwa mubayiro. Semuenzaniso 'Imbwa Yakanaka!', Kubaya, kuombera. izwi remubairo rakanaka rinosimbisa.)
Paunopa mubairo imbwa, inofanirwa kuve inoenderana nehunhu hwasarudzwa. Mubairo haubatsiri kana ukaushandisa panguva isiriyo. Nekudaro, iro dambudziko rakajairika nemubairo nderekuti vanhu vanozopa mubayiro imbwa nekusaziva maitiro asina kufanira. Heuno muenzaniso: Imbwa yako inohukura kana kuhukura painoona dzimwe imbwa. Sezvo iwe uchifunga kuti anotya, iwe unomupuruzira kuti amudzikame. 'Zvakanaka,' unodaro. 'Hapana chakaipa chichaitika.' Zvakanaka, saka chii chakaitika? Imbwa yakahukura, iwe wakamupa mubayiro. Iye haasi dummy; achapururudza zvakare mutariro yemubairo nguva inotevera.
Kugadziriswa kwakazara zvakaenzana nemisungo. Chekutanga pane zvese, chii chinogadzira kururamisa? Izvo zvakatonyanya kunetsa kupindura pane mibairo. Kune dzimwe imbwa, matauriro ezwi achazviita, kune vamwe havambozozviona. Mazhinji magadzirirwo akajairika ari echipiri (semuenzaniso, akadzidza) kugadzirisa. Uye, zvakawanda zvakajairika kururamisa chaizvo hazviite chero chinhu kunze kwekuita kuti imbwa itye iwe, kana, kana ikashandiswa zvisingaenderane, ita kuti imbwa irasikirwe kuvimba newe. Heano mumwe muenzaniso wekare. Imbwa yako iri kumucheto kwemunda, uye unomudaidza. Haauye. Unomudana zvakare. Haauye. Kunyangwe iwe uchimufonera kangani, haauye, saka iwe fora pamusoro uye utange kumururamisa. Kana, iye pakupedzisira anouya pamusoro uye panguva ino iwe unopenga kwazvo unomugadzirisa. Saka chii chinoitika? Muchiitiko chekutanga, imbwa inogona kunge isinga zive kuti unopenga nezvei. Kana asina kumbobvira adzidza rairo 'uya' (kunyangwe kana iwe uchifunga kuti anozviziva) saka kuenda pamusoro nekumupepeta akati wandei akanaka kuchamudzidzisa kuti zvakashata chaizvo kana iwe ukaenda padyo naye! Kana akauya kwauri uye iwe ukamupepeta yakanaka, iwe unofunga kuti anozorangarira nguvai inotevera paunomusheedza kuuya? Ndizvozvo, iwe wakangoshandisa kururamisa kune hunhu (kuuya kwauri) kuti uderedze!
Vanhu vanowanzo shandisa zvisirizvo mibairo uye kugadzirisa nenzira iyi nekuti vanhu vazhinji vanoita kunge vanofunga kuti imbwa dzinonyatso ziva maitiro akanaka uye akaipa uye anonyatso batanidza hunhu humwe (kubva kune akati wandei) nechirango. Izvi hazvisi izvo. Imbwa dzichabatana izvo zvavachangobva kuita nekugadzirisa kana mubairo.
Makomendi paKudzidzisa Maitiro
Sezvandakaonesa, kune akati wandei enzira dzakasiyana dzekudzidzisa dziripo. Hapana imwe yedzidziso idzi yakakwana uye hapana inovimbiswa kushanda pambwa yako (zvisinei nezvazvinotaura pabutiro).
Vanhu vanogara vasingabvumirani kuti ndedzipi nzira 'dzakanaka' uye kunyange ndedzipi 'dzakanaka.' Rudzi urwu rwekupokana harwuna musoro, sezvo kushanda kweimwe neimwe nzira yekudzidzira kuri kuzviisa pasi. Tsvaga imwe inokushandira uye usazvidya moyo nezve kushoropodzwa. Kune rimwe divi, mazano ekubatsira kukunda chaiwo matambudziko ekudzidzisa anogona kunge ari izvo zvaunoda uye haufanire kuzviramba kubva paruoko nekuti hazvisi munzira yawasarudza.
Mudzidzisi akanaka anokwanisa kuziva nzira dzakasiyana siyana dzekudzidzisa imbwa maitiro ekuita chimwe chinhu. Varairidzi vakanyanya kugona kuverenga imbwa dzavo uye kunhonga chakanakisa imbwa iyoyo kuti vadzidzise chimwe chinhu. Havasi vese isu vane hungwaru, asi kuda kudonhedza chimwe chinhu chisiri kushanda uye kuyedza chimwe chinhu kuchiri kutitorera isu kuwana mukana wekuwana nzira kwayo yekudzidzisa imbwa chimwe chinhu. Nekufamba kwenguva neimwe imbwa, iwe unofanirwa kuona kuti iwe unowanzo sarudza nzira kwayo yekuburitsa pfungwa nyowani kune iyi imbwa.
Mhedzisiro yakanaka mukuteerera kudzidziswa inoda madosi makuru ekusagadzikana, nguva yakanaka, uye moyo murefu. Iwe unofanirwa kuve unowirirana: shandisa izwi rimwe chete kune rimwe rairo nguva dzese (semuenzaniso, usashandise 'Huya' dzimwe nguva uye 'Huya kuno' dzimwe nguva). Iwe unofanirwa kukudziridza pfungwa yakanaka yenguva kana uchiunza mirairo mitsva uye wozogadzirisa maitiro pane yakadzidza mirairo. Mwoyo murefu unodiwa: kurasikirwa nehasha dzako hakuna zvakunobatsira. Ita kuti mhuri yese ibvumirane pamirairo, asi uve nemunhu mumwe chete anodzidzisa imbwa kudzikisira kuvhiringidzika kwembwa.
Gadzira nguva yekudzidzira mazuva ese, zvirinani nguva yekudya isati yasvika. Inogona kuve ipfupi semaminetsi makumi maviri, kana kupfuura. Kugadzira maitiro kunobatsira.
Usatarisira kubudirira kweusiku. Zvinogona kutora kusvika kumakore maviri ebasa risingachinji, zvinoenderana nembwa, kune imbwa yakanyatsodzidziswa. (Apa ndipo panouya kutsungirira!)
Iwe unofanirwa kurumbidza kazhinji uye zvisina kujairika. Kunyemwerera hakuzoiti. Ipa rumbidzo yakawanda yemuromo, kwenya imbwa yako mumusoro, nezvimwe.
Edza kugadzira iro rekuraira izwi chikamu chemutsara wekurumbidza. Mune ino kesi, chero nguva imbwa yako iri pachinzvimbo chetsitsinho chaunoda, unogona kutaura chimwe chinhu se 'Chitsitsinho chakanaka!' nezwi rekurumbidza izwi. Ziva kuti iwe unongopa rairo kamwe chete asi kuti izwi rekuraira rinodzokororwa mumutsara wekurumbidza wekusimbisa. Izvo zvinoita sekugutsa chinangwa chevatsigiri vekudzokorora iwo murairo (kureva kurega imbwa ichinzwa rairo kazhinji) pasina kunyatsoidzokorora semurairo. Kupfuurirazve, nekuti zviri kutaurwa kana imbwa iri kuzviita nemazvo kwete panguva yekugadzirisa imbwa haigadzi kushamwaridzana kwakashata nemirairo sezvo yekupedzisira ichikonzera.
Kana iwe uine mbwanana - usamirira! Nyoresa mukireshi puppy kirasi kana ichinge yakwira kumusoro kwepfuti. Usamirira kusvikira mwana ave nemwedzi mitanhatu kuti atange chero chinhu.
Kurovedza pamberi 'pemwedzi mitanhatu yezera' kwakanaka kana iwe ukaona mbwanana ichitandara nezvidzidzo izvi. Ingo rangarira kuchengeta izvo zvidzidzo zvipfupi, usasunungure moyo murefu kana mbwanana yako ikangokanganwa kamwe kamwe zvese zvaimboziva, uye ichimupa yakawanda nguva kungova imbwanana. Mukufamba kwenguva, iyo nguva yaunoshandisa nembwanana yako uchiongorora, kutamba pamwe nekusangana nevanhu vatsva ingangodaro yakakosha pane ako mapfupi 'ekudzidzisa' zvikamu, asi zviitiko zviviri izvi zvinobatsira kwazvo.
Ita kuti zvinakidze mwana wacho.
Tarisira zvipingamupinyi. Kungoti nekuti mwana akanzwisisa zvawaireva nezuro, hazvireve kuti achazozvirangarira nhasi. Izvi zvinoreva kudzokorora kuzhinji. Dzidzisa iyo yekutanga mirairo: gara, gara, uye uya izvozvi.
Unogona kuzviona zvakakodzera nguva yako, kunyanya kana iwe uri mutsva pakudzidzisa imbwa, kuenda kumakirasi ekuteerera. Nzvimbo zhinji dzine zvikoro zvekudzidzisa zvemuno. Ive neshuwa yekutarisa kumusoro kwenzvimbo idzi. Fonera Better Bhizinesi Bureau uye yako SPCA yemuno kune chero zvichemo zvakanyoreswa navo. Kunyanya tarisa nokungwarira nzvimbo kwaunotumira imbwa yako kuti inodzidziswa: dzakawanda dzenzvimbo idzi dzinofungidzirwa, nekuti iwe inofanirwa zvakare kudzidziswa kubata imbwa yako. Ngwarira kushambadza kunotora garandi yehupenyu pakudzidziswa, mhinduro dzakavimbiswa, nezvimwewo. Zvakanyanya kunaka kuti iwe nembwa yako muite dzidziso yekuteerera pamwechete, kuti imi mose mudzidze kubva kune mumwe nemumwe.
Hazvina mhosva kuti ndewe rudzi rwekirasi iwe rauri kutsvaga: kubva kune yekutanga puppy kindergarten kune yako diki mbwanana kune yakakosha kuteerera kune imbwa yakura kune yakafambira mberi kudzidziswa kune imbwa yatove kuita rimwe basa, iwe uchazoda kusarudza iyo kirasi kunze nokungwarira .
Kutanga uye pamberi pezvese, sarudza kirasi paunenge wakasununguka nenzira uye nemudzidzisi. Kana ukasatanga nenhanho iyi, kudzidza chero chinhu chakanaka kubva mukirasi kungangoitika.
Wobva watarisa kukura kwekirasi uye kuti inguvai iyo murairidzi anoshandisa nemunhu wega wega. Sezvineiwo, zvidiki kirasi zviri nani, kunyangwe kumakirasi embwanana iwe unoda inguva ina kana shanu imbwa sezvo kushamwaridzana iri chikamu chakakosha chekirasi. Mudzidzisi anogovera nguva kunze kwekirasi yemibvunzo (ingave imwe maminetsi akati wandei pamberi kana mushure mekirasi kana kukupa iye nhamba yefoni yekirasi)? Ndedzipi vimbiso dzavanopa? Kana vakati pooch yako ichadzidziswa mumavhiki matanhatu zvachose, hapana mibvunzo yakabvunzwa, mhanya usafamba uchibva pachipfeko ichi. Kana, zvakadaro, ivo vachipa rubatsiro rwekutevera mushure mekunge kirasi yapera kana kupa mashoma ekuwedzera makirasi ematambudziko chaiwo mushure kana mukati mekirasi, ichi chipfeko chakanaka.
Tarisa uone kuti mutemo wavo chii nembwa dzine hukasha mukirasi. Zvinoitika kuti imwe yembwa dzinopinda mukirasi inotyisa nekutyisidzira dzimwe imbwa. Panofanira kuve nechikamu chekudzinga imbwa yakadai (kana zvirinani zvakadaro, kuenda mukudzidzira yega), kana kuidzipwa muzzled uye nekumwe kudzorwa kudzikisira kukanganiswa kukirasi.
Kuwana Imbwa Yako
Chinhu chakakosha pakuteerera kudzidziswa kutora imbwa yako kutariswa. Imbwa yako haizoite senge nyore kana iye asiri kukuteerera. Pane zvinhu zvinoverengeka zvaunogona kuita kuti atariswe, uye iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekumurumbidza nekuteerera.
Kuchenjerera kunoenda munzira mbiri. Iwewo, nyatsoteerera imbwa yako. Imbwa zhinji dzinomira kungwarira kana dzichiziva kuti hausi kuteerera. Kana paine chimwe chidimbu chezano rakajeka nezve kudzidziswa kwembwa izvi zvinofanirwa kunge zviri izvo.
Isa imbwa yako pane yepakati-kusvika-pfupi leash uye umusunge bhandi rako. Zvino, tenderera nezve imba pane rako rakajairika bhizinesi. Usateerere imbwa. Ichakurumidza kudzidza kukuteerera iwe kuti uone kana iwe uchizomuka uye kufamba-famba, kana kwauri kuenda. Ichi chiitiko chinonyanya kushanda nembwanana uye zvakare chinoisa hwaro hwakanaka hwekudzidza chitsitsinho gare gare. Kutanga nenguva pfupi, taura maminetsi gumi neshanu, uye shanda kumusoro apo mwana wako achikura uye achijairana neichi chiitwa.
Kana iwe ukatarisa kumusoro uye wabata imbwa yako ichikutarisa (izvi zvakasiyana nemakwikwi anotarisisa ataurwa pamusoro apa nekuti imbwa haisi 'kukutarisa' kwauri kana ichikutarisa famba famba), murumbidze.
Chikafu mumuromo mako, uchichipfira imbwa yako
Chiitiko chakanakisa chekudzidzisa kutarisisa. Inoita kuti imbwa inyatso tarisa kumeso kwako, kwete maoko ako kana homwe. Ita izvi sechiitwa chakaparadzaniswa, kudzamara imbwa yako yanzwisisa kuti inofanira kutarisa kumeso kwako. Zvakare, USAVasiye vatore chikafu kubva pasi kana pasi. Kana iwe ukadaro, ivo vanozodzidza kuti ivo havafanirwe kubata kurapwa. Ivo vanogona kungomirira voitora. Uye usavarega vachidzoka gare gare kuzogeza.
Kutaura zvinyoro nyoro
Taura zvinyoro-nyoro kune imbwa yako. Iye achatofanira kukupa ngwariro yakawanda kwauri. Izvi zvinonyanya kushanda kana uchiri mudiki, uye itsika yakanaka yekupinda mairi.
Kuchenjerera sechikamu chechiitwa
Sanganisa kutarisisa mukurovedza pachako. Semuenzaniso, kutsetedza hakusi kungochengeta parutivi rwako nenzira kwayo, zvakare kuri 'kutarisisa * uchiri kutsamwa. Kumbira kutarisirwa uku sechikamu chekurovedza muviri, uye imbwa yako yekugona chitsitsinho inofanirwa kusimudzira.
Haufanire kugadzirisa kana iwe pachako wakatsamwa, wakatsamwa kana kupenga chaiko, kunyanya paimbwa yako. Kugadziriswa kwakanaka kunoenderana nenguva, kuziva kwakanyanya izvo imbwa iri kufunga, uye nekukurumidza kuchinjika pakati pekugadzirisa nekurumbidza, zvese izvi zvakaoma kana wagumbuka. Misa kurovedza muviri kusvikira wawanazve kuenzana. Uchave neyakaomarara kudzidzisa imbwa yako kana ukaramba uchipenga uchiri kuzviita. Muchokwadi, kana iwe uchigara kana kazhinji uchipenga kana uchidzidzisa imbwa yako, mumwe munhu anofanira kumudzidzisa. Iwe hapana chaunowana zvachose kupopotera imbwa yako.
Iyo dictum 'usadzidzise pamberi pemwedzi mitanhatu yezera' haina musoro chero kunze kwekunge iwe uchitaura nezve kururamisa kwakabatanidzwa mukuteerera kwekuteerera kudzidziswa. Kana iwe uchifunga nezvazvo, iwe unodzidzisa imbwa yako nguva dzese kunyangwe iwe uchizviziva iwe kana kwete. Imbwa dzakanaka pakusimudza mutauro wemuviri wako uye matauriro ezwi. Kunyangwe iwe usiri kuyedza kuvadzidzisa, ivo vari 'kuzvirovedza' ivo pachavo vachishandisa matipi atinovapa (uye akawanda 'matambudziko' zviitiko zvekare zvembwa kusanzwisisa zviratidzo zvemuridzi wavo).
Kana zvichikwanisika nembwanana diki zvakanakisa kushandisa 'kururamisa' kwekukanganisa. Paunoramba mbwanana chimwe chinhu, edza kuchitsiva nechiitiko chakanaka pane kungova wakaipa uye unodzvinyirira nguva dzese. Zvikasadaro, gadzirisa ako ekugadzirisa kune mazwi 'kwete.'
Imbwa zhinji pane imwe nguva dzinoramba kuita chinhu chaanoziva kuita. izvi zvakasununguka pamabatiro aakadzidziswa. Kurwira rusununguko kunoita kunge semi-universal mammalian hunhu, kutonga kubva kune hunhu hwevanhu vachiri kuyaruka.
Nekudaro, iwe unofanirwa kuve wakagadzirira kumisikidza pfungwa yekuti imbwa haina chaizvo sarudzo nezve kuita izvo zvaunomuudza kuti aite. Zvikasadaro imbwa ichawedzera kusarudza kuti ikuteerere kana kwete uye kusavimbika. Iwe unofanirwa kuziva iyo imbwa iwe yauri kudzidzisa uye kugona kuudza musiyano pakati pekuvhiringidzika uye kuramba. Kugadzirisa imbwa yakavhiringidzika kune ngozi. Kudzidza kutaurira mutsauko chikamu chekuve mudzidzisi. Kunyange pasina munhu anogona kunyatsokudzidzisa hunyanzvi uhu, unofanirwa kuudzidza.
Gara uchirumbidza imbwa nekukasira kana ichiteerera kumagadziriso ako. Zvekare, izvi zvinopa 'jekyll uye hyde' kunzwa kubata nembwa yako. Asi zvakakosha kuti ukurumbidze imbwa yako nekukuteerera. Izvi zvinobatsira kuvaka chivimbo uye zvinochengetedza imbwa kubva pakuva neiyo 'hang-imbwa' inotaridzika painenge ichiita.
Kufaira inzira yaunoita kuti uve nechokwadi chekuti imbwa yako inonzwisisa rairo, mushure mekunge wadzidzisa imbwa kuraira. Hazvina kunaka kuratidza imbwa pane rairo iye achiri kudzidza zvazvinoreva.
Semuenzaniso, iwe unodzidzisa imbwa yako kugara. Mushure mekumuita kuti agare munzvimbo ine isina anovhiringidza, iwe unowedzera iko kumanikidza. Iwe unokanda mabhora mudenga wovabata, svina matoyi, ita kuti mumwe munhu amire padyo nembwa yako utaure zvinyoro-nyoro kwaari. Kana imbwa yako ikasimuka, nyatsodzosera. Kana mushure mekuita izvi kwechinguva, iyo imbwa ichiri kumuka, ipapo unotanga kumudzorera zvishoma zvinyoro, kureva kutora imbwa yako zvakaomarara nekora nekumudzorera, ichikwira kusvika kunhonga imbwa yako kumusoro nekora kuti makumbo ake epamberi ibva pasi uye ZVIKURU zvishoma ichimudzosera panzvimbo yayo, achiwedzera kunhonga iyo imbwa neganda rayo kuitira kuti iye makumbo epamberi abve pasi uye VASI zvishoma nezvishoma achimudzorera. Dzimwe imbwa dzinowana iyo pfungwa nekukurumidza kupfuura dzimwe; rega kuraira kana agara pasi.
Imbwa yako painopfuura nhanho iyi, wedzera kumanikidza nekukanda mabhora kwakamukomberedza, uchiakwiza pasi, nezvimwewo, Zvakare, mumwe munhu anofanira kuedza kumupa chikafu, kuita ruzha rwusinganzwisisike sekurova maoko, kuhukura sembwa, kuchema kunge katsi, kushandisa matoyi kana zvinhu zvinoita ruzha rwechienzi.
Kana imbwa yako ikapfuura nhanho iyi, wedzera kumanikidza nekumuisa pekugara uye uine mumwe munhu achishevedzera nezwi guru 'ROVER, HUYA!' (usashandise zita rembwa yako), 'Zvakanaka', 'PASI' (kana uchigara pasi). Kana uri kumba, mumuise pokugara uye enda unoridza bhero repasuo. Zvinofanira kutora mwedzi yakati wandei (6-8) kushanda kuburikidza nezvose izvi zvinovhiringidza uye kuchengetwa kunofanirwa kutorwa kuti isaridze imbwa pfungwa nekumuisa mumamiriro aasina kugadzirira kana nekurega imbwa ichi 'kuhwina' ( kureva, kubudirira kuita chiitiko).
Nguva dzose rega imbwa 'ikunde' pachiitwa chekupedzisira muchirongwa. Ndokunge, pedzisa zvirongwa nezvinyorwa zvakanaka, nekurumbidza kukuru. Izvi zvinoita kuti imbwa yako ifarire basa.
Kushandisa Chikafu Mukudzidzisa
Iko kushandiswa kwechikafu mukudzidzisa imbwa kune yakareba uye inokakavara nhoroondo. Vanhu vazhinji havadi kushandiswa kwechikafu, vachifunga kuti imbwa inofanira kuita zvinhu nekuti UNOMUKUMBIRA, kwete netariro yemubairo. Vanonongedzera imbwa dzinoramba kuita zvinhu ivo vachiziva kuti havawani chikafu chayo. Vamwe vanotsigira kushandiswa kwechikafu mukudzidziswa, vachiti kune imbwa zhinji ndiwo mubairo wakanakisa kushandisa, kuti kushandiswa kwechikafu inzira inehunhu yekudzidzisa imbwa, uye ndiyo nzira yakanakisa yekukurudzira imbwa.
Zvirokwazvo divi rega rega rine mamwe mapoinzi anoshanda. Semuenzaniso, kudzokororwa kwekushandisa kwechikafu sechiokomuhomwe kazhinji kunoguma imbwa ichiramba kuita chiitwa chinotarisirwa pasina chioko muhomwe. Nekudaro, izvi zvinoonekwa uye zvisiri izvo kushandiswa kwechikafu nevatsigiri vechikafu. Pane musiyano pakati pekupfumbata nechikafu nekupa mubayiro nechikafu. Pasi pechirongwa chekupedzisira, iyo imbwa haina kumboziva kuti ichawana chikafu here kana kwete nekuda kwekuita chiitwa. iyo mitemo yekusiyana kwekusimbisa inoreva kuti iyo imbwa ichaedza zvakanyanya uye kuomera iyo mubairo. Dambudziko nderekuti vanhu vazhinji havazive nzira yekupa mubairo nguva nenguva, uye zvakare ichokwadi kuti mibairo inowanzoitika apo imbwa iri kudzidza kurovedza uye inodonha kana iyo imbwa yazvinzwisisa. Vanhu vazhinji vanokundikana kucherechedza kufambira mberi kwembwa, uye kuwira mutsika, uye nokudaro mukuita chioko muhomwe.
Kune rimwe divi, haisi imbwa dzese dzinova mutambi anofarira kurumbidza nemuromo kana matoyi ega. Nezvimwe zvinosarudzika, dzinenge imbwa dzese dzinozoona chikafu semubairo wakanaka uye vochinja hunhu hwavo nenzira kuti vawane zvimwe zvacho.
Iyo gakava rakadzika midzi mukufunga kwakawanda kwefilosofi kupfuura mukuita chaiko (kana kwete) kubva mukushandisa (kana kwete) kwechikafu. Vamwe vanhu vangori vasingafarire zano rekupa mubayiro nechikafu, uye vamwe havana basa nekuchishandisa.
Icho chinonyanya kukosha ndechekuti, chikafu kana kwete, imbwa zhinji dzinoda mubairo, chinokurudzira, kuitira kuti dziise simba radzo dzese mukudzidzira. Uye mudzidzisi anofanira kunzwisisa (uye kucherechedza) maitiro ekuziva kuti ndeupi mubayiro wakanyanya wembwa uye kuti ungashandise sei mubairo zvakanyanya.
Kurovedza uye Kugadzirisa Makorasi
Kune akati wandei marudzi emakola. Iko kune bani rakapetwa rakapetwa rakakwenenzverwa rekushandisa kwemazuva ese rinowanikwa mune akasiyana siyana mavara, saizi uye zvinokurumidza (kubva kubhakera kusvika kukurumidza-kuburitsa).
Ziva kuti vana (kazhinji vari pasi pemwedzi mitanhatu yemakore) havadi makorari ekugadzirisa.
Nezvinangwa zvekudzidzisa, pane akachidzwa makorasi (anonziwo ekudzidzisa makorari), pini mboro uye prong makorari. Ichishandiswa mushe, hapana chakaipa nechero yeaya makorari, kunyange achiwanzo tarisa kunge anotyisa. Iyo poindi ndeyekuti aya makora ndeekutonga, kwete ekurwadziswa ekurwadziwa. Yanking zvine hukasha pane aya makorari hazvina maturo; kugadzirisa kwakasimba kunotora poindi pasina kukuvara. Edza kuyedza uku: putira yega yega makorari akapoterera ruoko rwako uyezve kuti mumwe munhu ave neruzivo agadzirise ruoko rwako.
Kuti udzivirire imbwa yako kubva mukukuvara kubva kune inogadzirisa makorari, usavasiye paunenge usipo. Yayo yenguva dzose collar inofanira kunge iri pachena yakapetwa yakakora kora; ponesa iyo yakadzipwa uye prong makorari ekudzidzisa chaiko uye kana iwe uripo.
Tarira: makorari emagetsi ndeimwe nzira yemakorari ekudzidzira, asi haufanire kuedza kuzvishandisa pasina rubatsiro rwemurairidzi ane ruzivo. Vazhinji varidzi vembwa havangambofaniri kushandisa iyi kora; iyo yekutanga inoshandiswa kudzidzira kune kukwikwidza zviitiko kana miedzo, padanho rakapfuura iro rezvinodiwa nemuridzi wechipfuwo. HAPASI 'kugadzirisa nekukurumidza uye nyore' kune hunhu kana matambudziko ekudzidzisa uyezve anogona kuvashatisa zvakanyanya. Kana iwe uchifunga kuti mamiriro ako ezvinhu anotendera kuti ushandiswe kora yemagetsi, tanga wawana wega mudzidzisi ane ruzivo kuti akubatsire. Ita shuwa kuti unoona uyu mudzidzisi achishanda nembwa dzavo uye kuti iwe unofarira maitiro aunoona.
Waya Vhudzi Bvudzi Dachshund: Mbwanana, Vanochengeta & Yekutakura Nongedzo
Ko Goridhe Retriever Chow sanganisa imbwa dzine hukasha?
husky uye mufudzi weAustralia musanganiswa
musiyano pakati pe labrador negoridhe retriever
nzeve dzinopisa pambwa
wolf german shepherd mix puppies